के मानव र रोबटको सहवास सम्भव छ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य के मानव र रोबटको सहवास सम्भव छ?
२०७४, १४ श्रावण शनिबार २०:३६
रोबटबारे लेख्ने एक जना लेखकले आफ्नो रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाजस्ता देखिने सेक्स रोबट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’
डा. रिचर्डसन पनि यस्ता रोबटको भविष्यमाथि आशंका गर्छिन्। भन्छिन्, ‘रिपोर्टका अनुसार मान्छेजस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने रोबोट निर्माण गर्न सकिन्छ। तर, प्राविधिक रुपमा यस्ता रोबट निर्माण गर्नु अत्यन्त जटिल छ।’swasthyakhabar.com
Next articleखाल्डोभित्र गाडिएको शिशु रोएपछि…